Ungazifaka kanjani futhi uzisebenzise kanjani izitika kumilayezo ye-iOS 10 (I) | Ngivela kwa-mac
Ungazifaka kanjani futhi uzisebenzise kanjani izitika kumilayezo ye-iOS 10 (I)
Uhlelo lokusebenza lwemilayezo lwendabuko nge-iOS 10 luguqulwe ngokuphelele. Manje ayigcini ngokubukeka ngokuhehayo kuphela, kepha futhi kufaka izici ezintsha nemisebenzi enothisa izingxoxo zethu futhi unikeze umuzwa omnandi kakhulu, ojabulisayo futhi ocebile usebenzisa okusha imiphumela emilayezweni, izitikha, izinhlelo zokusebenza, ukubhala nokudweba mahhala, nokunye okuningi.
Ukulandela izinyathelo zezicelo ezifanayo ezifana ne-Facebook Messenger, LINE, noma iTelegram, U-Apple wenze ukweqa kulokho okuthiwa yi-«stickers ', okuthile okufana nezitika zesikhathi esikhulu ezinikeza abasebenzisi izindlela ezintsha zokuziveza. Njengokuphila kwangempela, lezi zinamathelisi ku-iOS "zinganamathiselwa" kumilayezo esiyithumelayo, noma ingathunyelwa ngawodwana. Ungashintsha futhi usayizi wazo, zingashintshwa futhi zinamathele kwezinye izitikha ngemiphumela emikhulu. Kuwo wonke lo mbhalo, nengxenye yawo yesibili, sizocubungula ukuthi singasisebenzisa kanjani lesi sici esisha semilayezo ku-iOS 10, kusuka ekufakeni amaphakethe esitikha ukuwathumela koxhumana nabo. Uma ufuna ukwazi konke mayelana nokunamathiselwe kumilayezo, qhubeka ufunda.
1 Kunjani ukufakwa kwamaphakeji esitikha kumilayezo
2 Izisekelo eziyisisekelo zezitika
Kunjani ukufakwa kwamaphakeji esitikha kumilayezo
Amaphakheji wezitika ingafakwa njengezinhlelo zokusebenza ezimele yodwa nge-iMessage App Store. Zingalandwa futhi njengezengezo zezinhlelo zokusebenza ezigcwele ze-iOS. Kunoma ikuphi, uma ufuna ukufaka amaphakethe "ezitika" ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yakho, okumele ukwenze ukulandela izinyathelo ezingezansi.
Vula uhlelo lokusebenza lwemilayezo bese ukhetha ingxoxo noma yakha ingxoxo entsha.
Chofoza kusithonjana se-App Store ozosithola eduze kwebhokisi lokufaka umbhalo bese uchofoza kuphawu lwamaphoyinti amane ukuvula isigaba lapho zonke izinhlelo zokusebenza ozilandile wazifaka kuMilayezo zigcinwa khona.
Thepha isithonjana "+" ukufinyelela esitolo sohlelo lokusebenza lwe-iMessage.
Manje phequlula isigaba se-Stickers sale App Store for Messages njengoba wenza nje ku-App Store ejwayelekile. Uma uthola iphakethe olifunayo, chofoza ku- "Get" (uma kumahhala) noma chofoza intengo yokuthenga. Uhlelo luzodinga ukuthi uqinisekise ubuwena ngokufaka iphasiwedi noma ngomsebenzi we-Touch ID, njengasesitolo esisezingeni lesicelo.
Chofoza kuthebhu "Phatha" ukufaka amaphakheji esitikha (noma ezinye izinhlelo zokusebenza) ezitholakala njengezengezo zezinhlelo zokusebenza ze-iOS. Ukufakwa kwenziwa ngokusetha iswishi endaweni yayo evulekile (eluhlaza), ngenkathi kususwa iphakethe "lezitika" kwenziwa ngokucisha lesi silayida.
Ngokuzithandela, kuthebhu ethi "Phatha", uzokwazi ukwenza kusebenze inketho «Faka izinhlelo ngokuzenzakalela» ukuze zonke izinhlelo zokusebenza ezinezitika zokufaka, zifake ngokuzenzakalela kumilayezo.
Chofoza ku- "Ok" (phezulu ngakwesokudla kwesikrini), futhi iphakethe lezitikha elisanda kufakwa manje selizotholakala ebhokisini lakho lesicelo.
Ukuyifinyelela, cindezela isithonjana ngamachashazi amane (ezansi kwesobunxele kwesikrini), noma swayipha kusuka kwesobunxele uye kwesokudla ngezinhlelo zokusebenza ovele uzifakile.
Izisekelo eziyisisekelo zezitika
Uma ukhetha izitika ongazengeza ezingxoxweni zakho, zivela esikhundleni sekhibhodi ye-iOS, njenge i-emoji. Ukuthumela isitika kothile kulula njengokukhetha. Lokhu kuzofakwa ebhokisini lombhalo futhi kufanele ucindezele umcibisholo wokuthumela okwesibhakabhaka ukuze uwuthumele koxhumana naye. Inqubo ifana ncamashi nalapho uthumela umlayezo wombhalo ojwayelekile kuzinhlamvu ze-emoji.
Isitika singenye yezindlela ezihlekisa kakhulu zokuziveza. Labo bethu abasebenzisa iTelegram bazi kahle lokhu kahle, futhi yingakho sisithanda kakhulu lesi sibuyekezo. Kepha kuningi esisazokubona, cishe okungcono kakhulu, ngakho ungaphuthelwa yingxenye yesibili yalokhu okuthunyelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungazifaka kanjani futhi uzisebenzise kanjani izitika kumilayezo ye-iOS 10 (I)
Izinketho ezintsha ku-MacOS Sierra Finder
Isicelo samahhala se-Chipmunk ukususa amafayela aphindaphindiwe